Asus ROG Strix G531, laptop-ka loogu talagay kuwa ugu badan, waxaan ku falanqeyneynaa | War gadget
Asus ROG Strix G531, laptop oo loogu talagalay cayaartoyda ugu badan, waan falanqeyneynaa
Waan ognahay in kuwa nadiifiya badankood aysan ka fikireynin "laptop" gamer, si kastaba ha noqotee, badeecadan ayaa si sii kordheysa u kordheysa sababo la xiriira baahida iyo dhaqdhaqaaqa iyo tayada sii kordheysa ee qaybaha shirkadaha sida Alienware iyo ASUS ay ku sii kordhayaan kuwan aadka loo dhaleeceeyay. kooxaha waqti ka hor. ASUS waxay rabtaa inay wax ku adkaato kuwa dhaleeceeya alaabtaan. Wadashaqeyntii ugu dambeysay ee aan la yeelanno ASUS waxaan gacmaha ku haynaa ROG Strix G531, oo ah kombiyuutar kumbuyuutareed lagu ciyaaro oo mahadcelin ka helaya astaamaheeda ujeedadeeduna tahay inuu soo jiito tiro yar oo taageerayaal ah. Haddii aad rabto inaad ogaato sida ay isu difaacayso iyo astaamaha ugu waaweyn ee ay leedahay, ku sii jir gorfayntayada iyada oo aan la furin.
Sida marar badan, waxaan go'aansanay inaan lasocno falanqeyntan muuqaal fiidiyow ah oo naga caawin doona inaan aragno sida laptop-kan gamer-ka ah u shaqeeyo iyo sida uu isaga difaaco dhan walba. Taasi waa sababta aan kuugu martiqaadeyno inaad daawato fiidiyowga u adeegaya cinwaanka cinwaankan falanqaynta oo ka faa'iideyso nooca qoraalka faahfaahinta looga hadlay. Intaa waxaa sii dheer, sanduuqa faallooyinka ee fiidiyowkeena YouTube-ka waxaan uga jawaabi doonnaa dhammaan su'aalahaaga ku saabsan sheyga, annagoo awood u leh inaan ku kobcinno bulshada 'Actualidad Gadget' leh 'Like' iyo wadaagista fiidiyowga. Haddii aad xiiseyneyso, Waxaad ka iibsan kartaa 1.199 yuuro xiriirkan oo ah Amazon halkaas oo aad ku heli doonto maraakiib bilaash ah iyo dammaanad laba sano ah (LINK).
Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doonno waa inaan eegno tilmaamaha farsamo ee laptop-kan, Markan ASUS waxay na siisay moodeel lahaa jiilkii sagaalaad Intel Core i7, NVIDIA GeForce GTX 1660Ti graphics iyo 16 GB of RAM iyo waxyaabo kale oo dheeri ah, sidaa darteed waxaan diirada saari doonaa nooca gaarka ah ee la falanqeeyay.
1 Faahfaahinta farsamada
2 Software-ka iyo nalal fara badan
3 Shaashad weyn iyo isku xirnaan wanaagsan
4 Naqshad dagaal iyo astaamo caan ah
Asus ROG Strix G531 qeexitaan farsamo
Tusaale ROG Strix G531
Nidaamka hawlgalka Windows 10 Pro
Screen 17.3-inch FullHD IPS LCD (Ultra-Wide)
Gacaliye Intel i7 9750H ama i5 9300H
Kaydinta gudaha 1TB SSD
Afayeenada Stereo 2.0 oo ah 4W midkiiba iyo subwoofer dadban
Xiriirinta 1x USB-C 3.2 - 3x USB-A 3.1 - 1x HDMI - RJ45 - Jack 3.5mm
Xuduudaha kala duwan 2x 802.11a / b / g / n / ac WiFi - Bluetooth 5.0
Tilmaamo kale Nidaamka Quad LED
Batariga Qiyaastii 5 saacadood
Cabbirada 399 x 293 x 26
Software-ka iyo nalal fara badan
Waxaan ku bilaabaynaa qodobka ay ASUS rabto inay ku muujiso dadka kale, Waxay leedahay taageere labalaab ah, markan waxay udub dhexaad u tahay waxayna leedahay laba kuleyl oo xaga dambe ah iyo albaab hore. Taageerayaashani si toos ah ayaa loo hagaajin karaa iyadoo loo eegayo baahideena iyada oo loo marayo badhanka heeganka ah ee kumbuyuutarka, waxay badanaa noo ogolaaneysaa inaan kala dooranno: Aamusnaan, istaandar iyo turbo. Waxaa jira farqi u dhexeeya qaababka iyo habka aamusnaanta ayaa loo qadarinayaa. Way iska cadahay in qaabka Turbo uu abuuro hawo wax ku ool ah, si kastaba ha noqotee, isla marka aan wax badan ka dalbanno kombiyuutarka, waxay si otomaatig ah u maamuli doontaa awoodda iyo waxqabadka taageerayaasha si waafaqsan.
Waxaan sidoo kale leenahay "Aura", oo ah softiweer ay Asus ku dhexjirto laptop-ka sidoo kalena leh badhankiisa u gaarka ah taas oo aan awoodi doonno inaanu soo saarno astaamo qeexan oo shaqeynaya laakiin taas oo nidaamka maareynta nalka LED-ka uu ka sarreeyo wax walba, Kaliya maahan inaan leenaha ku leenahay furayaasha hoostooda, laakiin sidoo kale waxaan leenahay afar xarig oo nal ah oo ku yaal dhammaan dhinacyada laptop-ka taas oo ka dhigeysa inay u egtahay diskoo socod dhab ah, Laakiin tan ugu yar deegaanka «gamer» ayaa waali ka ah, aniguna xoogaa, ma diidi doono.
Shaashad weyn iyo isku xirnaan wanaagsan
Markii aan haysanno qalab leh astaamahan, oo leh qiyaaso iyo culeys aad u tiro badan, laga yaabee inay ka wanaagsan tahay in la doorto cabir ballaaran oo shaashad ah, inaad ku raaxeysatid la-qaadashada ereyadan ma ahan mid caqli gal ah. Taasi waa sababta nooca aan tijaabinay uu leeyahay 17,3 inches guddi heer sare ah, Waxay markaa saareysaa guddi IPS LCD ah oo bixiya heerka cusbooneysiinta 144Hz iyo jawaabta 3ms oo leh 100% oo ka mid ah sRGB kala duwanaanta iyo xallinta Full HD. Xallin dheeri ah ayaa la filan karay, laakiin dhab ahaantii waxay wax u dhimi laheyd heerkulka iyo waxqabadka qalabka, marka lagu daro, 17,3 inji waxaan ku noolaan karnaa HD buuxa. Si kastaba ha noqotee, HDR iyo Dolby Vision lama sheegin, ma awoodno inaan socodsiino sidaas darteed waxaan fahamsanahay inay ka maqan tahay muuqaalkan xiisaha leh ciyaaraha fiidiyowga qaarkood. Waa inaan halkaan ku muujino kuwa shaki galinaya inay runti toos uga imaaneyso laptop-ka.
3.5mm jack combo (makarafoonka)
Marka laga hadlayo isku xirnaanta, waxaan adeegsanaa saldhig heerkiisu sareeyo, ma jiraan isku xirnaansho la'aan waxayna si sax ah ugu kala qeybsamaan gadaasha iyo bidix, iyagoo siinaya fursad raaxo leh iyo jidaynayey xiriir toos ah Ethernet iyo HDMI taasi waxay mar kale na xasuusinaysaa xitaa haddii uu laptop yahay, looma qorsheynin in aad loo dhaqaajiyo. Ku saabsan isku xirnaanta wireless-ka waxaan leenahay a Dual antenna WiFi oo la jaan qaadaya 2,4 GHz iyo 5 GHz band oo tijaabooyinkayagu ay bixiyeen waxqabad aad u fiican, iyo sidoo kale Bluetooth 5.0, waxba uma seegno, si daacadnimo ah.
Naqshad dagaal iyo astaamo caan ah
Waxaan ku sameysan nahay balaastik madow, anaga oo ka dhigeyna nalalka oo dhan dhanka hoose. Waa arrin raaxo leh, waxay leedahay kumbuyuutar lambar iyo furayaasha WASD waa tarjumaad, il birqabe gamer. Dhinaceeda waxaan leenahay cudud gacmeed wanaagsan, laga yaabee inaan dhahno trackpad-ka xitaa wuu ku yaryahay. Waxaan leenahay 360 x 275 x 26 milimitir isugeynta culeyska aan ka yarayn 2,85 kiilo garaam, sidaan soo sheegnay, maahan waxa la qaadan karo ee aad arki doontid.
Runtii aad baan uga helay laptop-ka in softiweerku uu weheliyo shaqooyinka mana ahan wax dheeri ah oo aan firfircooneyn maadaama ay ku dhacday noocyo kale oo aan tijaabinay. Laakiin wax walba ka sarreeya, xaqiiqda ah inay si sax ah u bixiso waxa ay ballanqaadayso ayaa ah tan ugu xiisaha badan. Si kastaba ha noqotee, waxaan helay qodobo taban, tan ugu muhiimsan waa trackpad, taas oo sida badanaa ah kiiska ASUS ay yar tahay, aan macquul ahayn iyo laba badhan oo leh waddo aan sax ahayn. Tani waxay ka duwan tahay safarka saxda ah ee furayaasha iyo badhanka intiisa kale kumbuyuutarka.
Waxaad si toos ah uga heli kartaa 1.199 yuuro si toos ah Amazon,In kasta oo aad leedahay habeyn ballaaran oo loo habeeyo si aad u sameyso waxa aad jeceshahay, taas awgeed waad booqan kartaa bogga bogga ASUS ay u qoondeysay sheyga.
Ikhtiyaarrada habayn fiican iyo waxqabadka da 'yar
Nidaamka iftiinka xiisaha leh iyo barnaamijyada u gaarka ah
Dhawaaq xoog leh iyo soo bandhig hufan
Kiiboodh tayo leh
Trackpad ma aha in la xoqo
In kasta oo maaraynta gacanta ah, taageerayaashu aad u sarreeyaan
Badeecada kala duwani way yara ballaadhan tahay oo qasan tahay
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Asus ROG Strix G531, laptop oo loogu talagalay cayaartoyda ugu badan, waan falanqeyneynaa
LG wuxuu ku soo bandhigayaa bartamihiisa cusub bartamaha IFA 2019
eFootball PES 2020 FC Barcelona Edition mar hore ayey leedahay taariikh la soo bandhigi doono